Muummichi Ministeeraa Itiyoopiyaa kaabineewwan haaraa moggaasan
Roobii, Guraandhalaa 10, 2016 Local time: 20:42
Lakkoobsi Namoota Taayitaa muummicha Ministeerummaaf Filatamanii tokkoo ol ta'uun Faallaa Heera Itiyoopiyaa ta'uu Mala Jedhu Lammiiwwan Hagi tokko
FINFINNEE— Erga muummicha ministeeraa ta’uun muudamanii qabee yeroo jalqabaaf maqaa kaabineewwan isaanii kan dhiyeessan obbo Hayile Mariam Dassaaleny angwoota itti dabalaa lamaaf taayitaa iti aanaa muummicha ministeeraa kennanii jiran.
Ministeericha ministrii eegumsa fayyaa Dr. Tewdors Adahaanoom-n immoo ministeera dhimma alaa gochuun muudaniiru.
Muudamni har’aa iddoon duwwaan kabinee keessaa kan ittiin guutame ykn bakka jijjiiruu qofaa hin turre. Hedduun isaanii kan eegan, paartii dhumti biyya bulchu ibsaa kan ture irraa faallaa kan ta’e taayitaa haaraan kan itti kennameef aangoo gooddannaan kan itti geggeessame ture.
Bara 1987 erga sirni paarlaamaa hojii irra oolee qabee namoonni taayitaa itti aanaa ministeerummaa qaban namoonni itti dabalaa yeroo muudaman isa duraa ta’uu isaa ti.
Muudamni kun ba’ii qorannaa mana marii ministeerotaa keessatti irratti mari’atamaa tureeti kan jedhan muummichi ministeeraa HileMariam Dassaaleny muummeewwan ministeerotaa lamaan ga’ee hojii isaanii ibsanii jiru.
Most ViewedHiriira Jalduu fi Bulee Horaa, Deebii Angawaa Gujii“Mootumman Itoophiiya Tarkkanfii Oromiyaa Kessatti Fudhate Dogoggora Ta’u Amanee jira,” Ministirii Dhimma-alaa Yunaaytid Isteetsitti Itti Aantuu Ministeera Dhimmoota Afrikaa.Hiriirawwan Har’aa Oromiyaa Keessaa fi Tarkaanfii Humnoonni Mootummaa Fudhatan, JedhameKFO: Ajjeechaa Oromiyaa Keessatti Geggeessame Ka Qoratu Qaamni Walabni Hundeessamuu QabaAngawoonni magaalaa Adaree fi kan Bulee Horaa maal jedhu? Walisoon maal keessa turte?Most Listened Gabaasaa guutuu dhaggeeffadhaa Gabaasa guutuu armaan gaditti dhaggeeffadhaa Guutummaa gabaasaa kanaa dhaggeeffadhaa Gabaasni sagalee kunooti Guutummaa qophii keenyaa dhaggeeffadhaa